News Collection: के उनले यौन इच्छा यौनसम्पर्कको अन्तिम समयसम्म देखाउन सक्दिनन् ?
के उनले यौन इच्छा यौनसम्पर्कको अन्तिम समयसम्म देखाउन सक्दिनन् ?
प्रश्नः म २८ वर्षीय विवाहित युवक हुँ । मेरो विवाह भएको छ महिनाजति भयो । मेरी श्रीमतीको उमेर २२ वर्ष छ । हाम्रो यौनसम्पर्क सातामा दुई-तीन पटक सफल हुन्छ, धेरै पटकको प्रयासपछि । श्रीमतीसँग यौन क्रीडा हुँदा धेरै पोल्ने भएकाले हाम्रो यौनजीवन भनेजस्तो हुन सकेको छैन ।
उनको अनुहारमा धेरै पीडा देखेर बीचैमा यौनसम्पर्क तोड्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो पहिले कसैसँग सम्बन्ध थिएन र हामीलाई यौनरोग छ जस्तो पनि लाग्दैन । म यौनसम्पर्कका लागि एकदमै इच्छुक हुन्छु, तर मेरी श्रीमती पीडाका कारण त्यति इच्छा देखाउँदिनन् । यौनक्रीडा गर्दा उनको योनिको माथिको भाग -योनि र नाइटोबीच) फुलेको देखिन्छ । उनी यो कुरामा डाक्टरकहाँ जान पनि अप्ठ्यारो मान्छिन् । हामी एक-अर्काप्रति इमान्दार छौं । त्यसैले पनि म यौन सन्तुष्टिका लागि अन्त धाउँदिनँ । म उनीबाट मात्र यौन सन्तुष्टि लिन चाहन्छु । के उनमा वा ममा कुनै यौनरोग त छैन ? के हामीले पारिवारिक सम्बन्धजस्तै यौनसम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन सक्दैनौ ? के उनले यौन इच्छा यौनसम्पर्कको अन्तिम समयसम्म देखाउन सक्दिनन् ? - स.
उत्तरः यौनसम्पर्क कति ?
व्यक्तिअनुसार यौनचाहना फरक भएजस्तै उनीहरूको यौन क्रियाकलापमा संलग्नता पनि फरक-फरक हुन्छ । यो स्वाभाविक कुरा नै हो । यौनसम्पर्कको सन्दर्भमा पनि कसैले धेरै पटक यौनसम्पर्क राख्छन् भने कसैले थोरै । आफू तथा आफ्नो यौनजोडीलाई असजिलो नहुने स्थितिमा चाहेजति यौनसम्पर्क गर्न सकिन्छ, तर पनि सामान्यतः व्यक्तिले कति यौनसम्पर्क गर्छन् भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरौं ।
मानिसहरू सामान्यतः सातामा यस्तै २ दशमलव ५ पटक यौनसम्पर्क राख्छन् । नवविवाहित जोडीले अलि धेरै सम्पर्क राख्छन् । सामान्यतः विवाह गरेको पहिलो वा दोसो वर्षसम्म एक दिन -२४ घण्टा) मा एकपल्ट सम्पर्क राखिएको पाइन्छ । त्यसपछि भने यो क्रम सातामा २ देखि ३ पटकमा र्झछ अनि वयस्क जीवनको लामो समयसम्म रहन्छ । विस्तारै प्रौढ अवस्थामा पुगेपछि भने त्यसमा अझ कमी आउँछ ।
किन श्रीमतीले यौनसुख प्राप्त गर्न नसकेको ?
यौनसम्पर्क थालेपछि पुरुषलाई चरमसुखसम्म पुग्न लाग्ने समय र महिलालाई लाग्ने समयमा केही फरक हुन्छ । विख्यात अध्ययनकर्ता किन्सेले गरेको अध्ययनअनुसार पुरुषहरू सामान्यतः लिङ्ग योनिमा प्रवेश गराएको यस्तै २ मिनेटमा चरमसुखको स्थितिमा पुग्छन् । उनका अनुसार महिलाको हकमा यो समय अलि बढी नै छ । यौनसम्पर्क गरेर चरमसुखको स्थिति प्राप्त गर्न महिलालाई यस्तै १० देखि २० मिने टसम्म लाग्न सक्छ । हस्तमैथुन गर्दा भने यो समय निकै कम हुन्छ । महिलाले यस्तै चार मिनेट भन्दा कम समयमै चरमसुख प्राप्त गर्छन् ।
कतिपय व्यक्तिलाई पुरुष तथा महिलामा हुने फरक थाहा हुँदैन । त्यसैले पुरुषले लिङ्ग पसाएर नै यौनसम्पर्कको सुरुवात गर्छन् । यसो गर्दा महिलाहरू राम्रोसँग उत्तेजित हुन पाएका हुँदैनन् र योनिरस पनि पयार् प्त मात्रामा नआएको हुनसक्छ । विशेष गरेर आफूले यौन चरमसुख प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति भएन भने त्यसमा रुचि वा उत्साह पनि कम हुनसक्छ ।
किन पोलेको होला ?
हुनत यौनसम्पर्क एक आनन्ददायक क्रियाकलाप हो, तर सबै यौनसम्पर्क सुखमय नहुन सक्छ र यस्तो पुरुष वा महिला दुवैमध्ये जसलाई पनि हुनसक्छ । अब महिलाका लागि यौनसम्पर्क किन पीडायुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा केही कुरा गरौं । यसो हुनुका कारणहरूमा योनिको संक्रमण प्रमुख हुनसक्छ । यौनरोग नै नभए पनि प्रजनन अङ्गको त्यसमा पनि विशेष गरेर योनि तथा त्यसवरिपरिका अङ्गमा संक्रमण हुन सक्छ । अर्को महत्वपूर्ण कारण योनि सुख्खा हुनु हो । यस्तो स्थितिमा यौनसम्पर्क गर्दा विशेष गरेर पोलेको अनुभव हुन सक्छ ।
त्यसैगरी यौनसम्पर्कसम्बन्धी नकारात्मक धारणाले ग्रसित भएको स्थितिमा वा डर भएको स्थितिमा यस्तो हुन्छ । विशेष गरेर भयातुर वा डरका कारण यौनसम्पर्क गर्न लाग्दा अकस्मात् योनिको मांसपेशीको संकुचित हुन्छ र कडा पनि । यस्तो बेलामा यौनसम्पर्क पीडायुक्त हुन्छ । अंगे्रजीमा यस किसिमको अवस्थालाई ख्बनष्लष्smगक भनिन्छ । तपाईंको पत्रमा भएको सीमित जानकारीका आधारमा यसै भन्न नसकिए पनि पर्याप्त योनिरस नआई यौनसम्पर्क भएको हो कि भनेर शंका गर्न सकिन्छ । योनि पोल्नुले पनि त्यसैलाई संकेत गरिरहेको छ ।
समाधानका लागि कुनै भय वा तनाव छ भने त्यसलाई कम गर्ने प्रयास गर्नुपर्‍यो । गर्भ रहने भय नहोस् भनेर भरपर्दो उपाय त प्रयोग गर्नुभएकै होला । यसका लागि श्रीमतीसँग सहज वातावरणमा कुराकानी गर्नुहोस् र त्यस्तो केही भए त्यसलाई हटाउने प्रयास गर्नुहोस् । यौनसम्पर्कका बेला योनि सुख्खा भएर दुख्ने समस्या कम गर्न थप चिल्लो पदार्थ प्रयोग गर्न सकिन्छ । पानीमा आधारित चिप्लोपदार्थ जस्तै KY Jelly प्रयोग गर्नुपर्छ ताकि कन्डमलाई कुनै क्षति नपुगोस् । कतिपयले थुकलाई राम्रो विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छन् ।
सामान्यतः भग (योनि) क्षेत्रमा प्रशस्त रक्तप्रवाह हुने भएकाले यौन उत्तेजित हुँदा केही फुलेको हुन्छ नै, तर तपाईंले भन्नुभएजस्तो योनि र नाइटोको बीचमा फुलेको कुरा अलि स्पष्ट भएन । थप जानकारीसहित पत्र लेख्नुभए जवाफका लागि प्रयास गर्ने थियौं ।
यौनसन्तुष्टिका लागि अरूकहाँ नधाउने कुरा
तपाईंको अरूतिर नधाउने कुरा पक्कै उत्तम विचार हो र सम्बन्धभित्र नै सुख प्राप्त गर्न सकिने उपाय गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छु । तपाईंहरूले आपसमा खुलस्त कुरा गरेर समस्याको पहिचान गरी त्यसलाई न्यून गर्ने प्रयास गरे पक्कै यौनजीवनलाई प्रगाढ र सुखमय बनाउन सक्नुहुन्छ । आवश्यक परे चिकित्सको सहयोग पनि लिनुपर्छ । तपाईंहरू सुखमय यौन सम्बन्धका लागि शुभकामना ।